Mitady Tonian-dahatsoratra Manana Zotom-po Hitarika Ny Fitantaram-baovao Ao Afovoany Atsinanana Ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2016 5:49 GMT
Mahay tenim-pirenena roa ve ianao- na tsara kokoa, mahay tenim-pirenena maromaro- manam-pahaizana momba ny Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra izay manome lanja ny rariny, ny fitoviana, ny finamanana miampita sisintany ary tsy leo aterineto? Tia miasa ao an-trano ve ianao? Mitady anao ny Global Voices!
Ny tonian-dahatsoratry ny Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (MENA) ao amin'ny Global Voices dia mitantana isan'andro ny fanangonam-baovao avy any amin'ny faritra, manoratra sy mandamina ireo tantara avy amin'ny vondrom-piarahamonin'ny mpanoratra, mpandika teny mpilatsaka an-tsitrapo tsy voasakan-tsisintany, ary mampivelatra ireo andiana loharanom-baovao goavana amin'ny aterineto mba hitazonana ny lohalaharana ao an-toerana amin'ny vaovao ara-tsosialy, ara-politika sy ny fikatrohana amin'ny aterineto.
Tokamanantany ny efitra fanoratana sy famoahanay vaovao – virtoaly tanteraka, mpilatsaka an-tsitrapo avokoa ireo mpanoratra, amin'ny teny marobe ny loharanom-baovao ary mivantana amin'ny aterineto. Ny ifantohan'ny fanangonam-baovao dia mikasika ny vaovao malaza, ny olan'ny fahalalaham-pitenenana, ny sivana amin'ny aterineto, ny fikatrohana sy ny vaovao izay zara raha voatatitra na taterina diso amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Ny andraikitry ny tonian-dahatsoratry ny Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra dia:
Mitantana sy mampandroso ny ekipa tompon'andraikitra amin'ny fitateram-baovao avy amin'ireto firenena ireto: Alzeria, Bahrain, Ejypta, Iraka, Israel, Jordania, Koety, Libanona, Libya, Maraoka, Oman, Palestina, Katar, Arabia Saodita, Syria, Tonizia, Emirà Arabo Mitambatra, Sahara Andrefana, Yemen
Manoratra, manamarina, ary mamoaka ao amin'ny aterineto izay tantara hita fa mandresy lahatra sy manan-danja ao amin'ny faritra misy azy ireo.
Mampiditra ireo tranga marim-pototra miseho ao anatin'ny tantara atolotra ho an'ireo mpamaky manerantany.
Mitazona ny laharana voalohany amin'ny fivoaran'ny tantara, izay malaza haingana sy ironana ao amin'ny media sosialy sy ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ao amin'ny faritra misy azy ireo..
Mampivelatra ireo lahatahiry misy ny loharanom-baovao antserasera azo antoka sy voamarina manerana ny faritra misy azy ireo.
Mitantana ireo mpanoratra mpilatsaka an-tsitrapo sy mpiara-miasa.
Manaja ireo fe-potoana sy ny isan-dahatsoratra.
Mivonona hiara-hiasa amin'ny vondrom-paritra virtoaly, efitra fanoratam-baovao ary ny fiarahamonina midadasika.
Miasa amin'ny aterineto miaraka manaraka ny tari-dalana famoahan-dahatsoratra, ny andraikitra sy ny kolontsain'ny vondrom-piarahamonina Global Voices.
Ny kandida mahomby dia:
Mahafehy tsara ny teny Anglisy sy ny teny Arabo. Tombony ny fahaizana teny Frantsay.
Manana fahaizana mafonja momba ny asa fanaovan-gazety na fikatrohana ny zo nomerika.
Mahafantatra izay feon'olom-pirenena sy ny sosialy azo antoka ao amin'ny faritra misy azy ireo.
Mahafantatra ny fampahalalam-baovao mahazatra, ny gazetim-paritra, sy ny fahavitrihan'ny media sosialy ao amin'ny faritra misy azy ireo.
Mahavita manoratra am-pihetseham-po sy fahafantarana tsara ny olana rehetra misy ao an-toerana ho an'ny mpamaky rehetra tsy ankanavaka.
Manana traikefa mafonja amin'ny fitarihana olona.
Afaka miasa ao anatin'ny 30 ora isak'herinandro.
Alefaso ny mombamomba anao (CV) sy taratasy famantarana manasongadina ny asanao ary manazava ny antony mahatonga anao ho sahaza tanteraka hoan'ny Global Voices. Alefaso ao amin'ny adminjob@globalvoicesonline.org ny fangatahanao hatramin'ny 4 Jolay 2016. Apetraho ny anaranao sy ny lohateny “Tonian-dahatsoratra MENA”.
Alohan'ny andefasana fangatahana, tsara ny mamaky ny Antony Lehibe 8 raha hiasa ato amin'ny Global Voices..